मोदीको नेपाल भ्रमणको औपचारिक घोषणा, के काठमाडौ बासिले अभिन्दन गर्लान? - Suvham News
मोदीको नेपाल भ्रमणको औपचारिक घोषणा, के काठमाडौ बासिले अभिन्दन गर्लान?
May 6, 2018 by gsmktm
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमण क्रममा काठमाडौं र जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन हुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मोदीको नागरिक अभिनन्दन राजधानीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले र धनुषामा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् ।
६ महिना लामो नाकाबन्दि गरेको भारत र भारतिय जनतापाटिका नेता तथा प्रधानमन्त्रिलाई काठमाडौका जनताले नाकाबन्दि बर्सियर अभिन्नदन गर्लान? गम्भिर प्रश्न उब्जियको छ?
मोदीले नेपाल भ्रमण क्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गर्ने बताइएको छ । भ्रमणमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको औपचारिक जानकारी शुक्रबार नै विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ । मोदीको भ्रमणमा रामायण सर्किट परियोजना सुरु गर्ने बताइए पनि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । भ्रमणमा मोदी जनकपुर र काठमाडौंसहित मुक्तिनाथ पनि जाने छन् ।
गत वर्षको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा वाम गठबन्धन विजयी भएसँगै मोदीले नेपाल भ्रमण गर्ने र जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरको दर्शन गर्ने चर्चा चलिरहेको थियो । यसैबीच नेपालका लागि चीनका राजदूत यू होङले गत माघ १८ गते जनकपुरधाममा बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरण गरेकी थिइन् । राजदूत होङ जनकपुरधाम भ्रमण गर्ने पहिलो चिनियाँ राजदूत हुन् ।
Prevपत्रकारिता विरुद्ध पत्रकारितावाद
Nextगाडीको ठक्करबाट ७५ किलोको मृग मर्‍याे